Min Lwin's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
MaleMaung Htaung, Butalin, Sit KineMyanmar Share on Facebook
Blog Posts (91)Discussions (147)EventsGroups (5) Min Lwin's Likes Min Lwin's Friends
Min Lwin has not received any gifts yet
aung phyo wai joined Min Lwin's groupMyanmar IT Wordsကွန်​ပျု​တာ​ကို​အသုံးပြု​ဖို့ အင်္ဂလိပ်​စာ လို​အပ်​ပါ​သလား။ အင်္ဂလိပ်​စာ မ​တက်​ရင်​ပဲ ကွန်​ပျု​တာ​နဲ့ ပတ်သက်​တဲ့ ပညာ​ရပ်​တွေ​ကို လေ့​လာ​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး​လား။အွန်​လိုင်း မြန်မာ​အိုင်​တီ​အဘိဓာန် ရေး​တဲ့ စနစ်​တစ်​ခု​ကို​ရေး​ကြ​ရအောင်။See MoreMay 10 8
Thar Htet Aung joined Min Lwin's groupMyanmar IT Wordsကွန်​ပျု​တာ​ကို​အသုံးပြု​ဖို့ အင်္ဂလိပ်​စာ လို​အပ်​ပါ​သလား။ အင်္ဂလိပ်​စာ မ​တက်​ရင်​ပဲ ကွန်​ပျု​တာ​နဲ့ ပတ်သက်​တဲ့ ပညာ​ရပ်​တွေ​ကို လေ့​လာ​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး​လား။အွန်​လိုင်း မြန်မာ​အိုင်​တီ​အဘိဓာန် ရေး​တဲ့ စနစ်​တစ်​ခု​ကို​ရေး​ကြ​ရအောင်။See MoreMar 15 8
IT ညီငယ္ joined Min Lwin's groupMyanmar IT Wordsကွန်​ပျု​တာ​ကို​အသုံးပြု​ဖို့ အင်္ဂလိပ်​စာ လို​အပ်​ပါ​သလား။ အင်္ဂလိပ်​စာ မ​တက်​ရင်​ပဲ ကွန်​ပျု​တာ​နဲ့ ပတ်သက်​တဲ့ ပညာ​ရပ်​တွေ​ကို လေ့​လာ​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး​လား။အွန်​လိုင်း မြန်မာ​အိုင်​တီ​အဘိဓာန် ရေး​တဲ့ စနစ်​တစ်​ခု​ကို​ရေး​ကြ​ရအောင်။See MoreMar 11 8
Min Lwin postedablog postJava and Android Programming Training Centerကျွှန်တော် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တာ ၂လရှိခဲ့ပြီဖြစ်၏။ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်တွင် SOLT ဟု အမြည်ရသော အိုင်တီ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွှန်တော်စိတ်ဝင်စားသည်မှာ Developing လုပ်ငန်းအပြင်ကို ပညာရေး လည်းပါပါသည်။ ကျွှန်တော်တို့ လေ့လာခဲ့သည်၊ တွေ့ကြုံခဲ့သည်ကို ပြန်လည် သင်ကြားလိုပါသည်။ အဲ့ဒီအတွက် Java နဲ့ Android နဲ့ပတ်သက်ပြီး Training Center တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။အစပိုင်းမှာတော့ Java ကနေစပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့သွားရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း၊…See MoreFeb 1 0
Kyaw Min Naing joined Min Lwin's groupMyanmar IT Wordsကွန်​ပျု​တာ​ကို​အသုံးပြု​ဖို့ အင်္ဂလိပ်​စာ လို​အပ်​ပါ​သလား။ အင်္ဂလိပ်​စာ မ​တက်​ရင်​ပဲ ကွန်​ပျု​တာ​နဲ့ ပတ်သက်​တဲ့ ပညာ​ရပ်​တွေ​ကို လေ့​လာ​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး​လား။အွန်​လိုင်း မြန်မာ​အိုင်​တီ​အဘိဓာန် ရေး​တဲ့ စနစ်​တစ်​ခု​ကို​ရေး​ကြ​ရအောင်။See MoreDec 26, 2012 8
Min Lwin postedastatus"http://ning.it/Shra2r"Nov 24, 2012 0
Min Lwin postedastatus"http://ning.it/UYzJwm"Nov 24, 2012 0
Min Lwin postedastatus"http://ning.it/QyTzSP"Nov 11, 2012 0
Min Lwin's Discussions
Unicode နဲ႔ ၾကည့္မရေတာ့လုိ႔
အခုတေလာ ျမန္မာအုိင္တီပရုိ က အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလည္းမႈ႕ေတြ ျပဳလုပ္ေနပံု ရတယ္။ ယူနီကုဒ္(Myanmar 3) နဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာေတြကုိ မျမင္ရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး Unicode နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မယ္ႏူးေတြကုိလည္း…Continue Started this discussion. Last reply by ttkz Aug 5, 2011. Processing Myanmar Characters
ဒီခေါင်းစဉ်ကို ဘယ်မှာသွားပြီး Post လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို တော်တော်စဉ်းစားရပါတယ်။ အဓိကကတော့ သိချင်တာပါ။ ဒါဆို Help Desk မှာ သွားမေးရမလားဆိုတော့ Help Desk မှာသွားမေးရမယ့် မေးခွန်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။…ContinueTags: ANSI, Unicode, Encoding Started Jun 27, 2011 Difference between Firefox and Chrome
Hello Myanmar IT Pro! I think, you change font setting of your site.Firefox can't view English words within Myanmar Words. But Chrome can view English words. Do you know what is wrong? But I think…Continue Started this discussion. Last reply by Min Lwin Jun 26, 2011. Mobiles 'may cause brain cancer'
Hello, how do you think about this news. The World Health Organization's cancer research agency says mobile phones are "possibly carcinogenic". …Continue Started this discussion. Last reply by Ko-AKM Jun 2, 2011. View All
Min Lwin's Groups
Myanmar IT Words
Min Lwin's Page
Loading feed	Min Lwin's Blog
Java and Android Programming Training Center
Posted on January 30, 2013 at 3:30pm0Comments
ကျွှန်တော် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တာ ၂လရှိခဲ့ပြီဖြစ်၏။ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်တွင် SOLT ဟု အမြည်ရသော အိုင်တီ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွှန်တော်စိတ်ဝင်စားသည်မှာ Developing လုပ်ငန်းအပြင်ကို ပညာရေး လည်းပါပါသည်။ ကျွှန်တော်တို့ လေ့လာခဲ့သည်၊ တွေ့ကြုံခဲ့သည်ကို ပြန်လည် သင်ကြားလိုပါသည်။ အဲ့ဒီအတွက် Java နဲ့ Android နဲ့ပတ်သက်ပြီး Training Center တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။
အစပိုင်းမှာတော့ Java ကနေစပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့သွားရန်… Continue ဒေါင်းသွေး
Posted on August 12, 2012 at 10:46pm0Comments
အရေးကြီးပြီ ညီအကို ညီအမတို့ သွေးစည်းကာ ညီကာညာကြစို့ ဒါဒို့မြေ ငါတို့မြေ
ငါတို့ သာသနာကို စော်ကား
မဟုတ်မတရား ပြောနေသူ ကုလားများအား
ငါတို့ ညီစွာ ဆန့်ကျင်ကြဆို့
ကုလားစုတ်… Continue What is important for A blogger
Posted on November 23, 2011 at 10:22pm0Comments
ဘလောဂ်ဂါတစ်ယောက်အတွက် ဘာအရေးကြီးသလဲ။ ဘလောဂ်ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာကို စောင့်ထိမ်းသင့်သလဲ။ ဘလောဂ်ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာကိုတန်ဖိုးထားသင့်သလဲ။ ဒီအကြောင်းတွေကို ကျွှန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်။ အင်တာနက်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့ ယနေ့ခေတ်ဟာ လွန်စွာမှ အစဉ်ပြေပြီး တိုးတက် ပြောင်းလည်းနေတဲ့ အချိန်တစ်ခု ကာလတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကြောင့် အမေရိကက တိုနီလားမားဖိနပ်ကို လိုချင်တဲ့အချိန်မှာ မှာပြီးစီးနိုင်သလို၊ အီတလီက ဂျင်းဘောင်းဘီကိုလည်း မှာဝတ်နိုင်တယ်။ နောက်ပြီး… Continue Zawgyi To Unicode File Converter
Posted on November 16, 2011 at 12:27am0Comments
ဟိုတလောတုန်းက ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုဒ်၊ ယူနီကုဒ်ကနေ ဇော်ဂျီကို ပြောင်းတဲ့ ကွန်ဗာတာတစ်ခု ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘလောဂ်တွေမှာရှိတဲ့ စာတွေကို ယူနီကုဒ်ကိုပြောင်းချင်တယ် ဒါပေမယ့် ပြောင်းဖို့က ခက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးရေထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ MySql မှာရှိတဲ့ ဘလောဂ်စာသားတွေကို Dump လုပ်ပြီးရင်၊ ကွန်ဗာတာကို ပြောင်းခိုင်းရုံပါပဲ။ ပြီးရင်ပြောင်းထားတဲ့ Dump ကို Restore လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ ထူးခြားတာကတော့ ဖိုင်တွေကို ခလုပ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ပြောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့… Continue AddaBlog Post
At 8:52pm on November 3, 2011, yong ae lynn said… ေယာင္အဲလင္းမွာ hacking အေၾကာင္းကိုဘေလာ့တစ္ခုမေရးေပးႏိုင္ပဲ မသိတဲ့လူ
ရပ္ပါါ မင္းအရမ္းေတာ္ေနလား ေတာ္ေနရင္ Online education တစ္ခုလုပ္ေပါ့ကြာ ခုဟာကမင္းလညး္ဟက္ကင္းနညး္ပညာကို ေ၀မမွ်ေပးနိုင္ပဲနဲ႕ကြာ သူမ်ားလုပ္ရပ္ေတြကိုရႈပ္ခ်တယ္ မင္းေတာင္မေတာ္လို႕ႏိုင္ငံျခားကနည္း ပညာ
အတူတူနဲ႕အႏူႏူကိုကို တတ္တာေလးကိုေ၀မွ်ေပးလိုက္ရင္ မုဒိတာပြားေပးလိုက္ရင္ မင္းလည္းကုသိုလ္ရပါတယ္ ကြာ စိတ္ေကာငး္ေလးေမြးဖို႕တိုုက္တြန္းတာပါ..
အကိုေရးတဲ့ဘေလာ့က ဟက္ကင္းမဟုတ္ရင္ how to hack gmail ဆိုတဲ့
ေယာင္အဲလငး္(ေတာသာေလး) At 3:47pm on May 19, 2011, Andreas Crox said… ခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ဆီမှာလဲ အကုန်လုံးနီးနီးတော့ စုံနေပါပြီ။ ဒီမှာက Connection သိပ်မကောင်းတော့ မနည်း Download ဆွဲရတယ်ဗျ။ At 2:58pm on May 18, 2011, Andreas Crox said… ကျွန်တော်က အဓိက က တော့ Android Applications တွေ Develop လုပ်ဖို့ပါ။ ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ Java ME တတ်ရင် ပိုများလွယ်မလားလို့ပါ။ ဒီအတိုင်းဆို Java ME နားမလည်ရင်လည်း သိပ်အခက်အခဲ မရှိနိုင်ဖူးပေါ့... Android Applications တွေ Develop လုပ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျ။ At 9:52am on May 18, 2011, theingi said… Now i am preparing to report the proposal about software engineering
but my proposal is noot good i think.
So, if u have news ideas, pls tell me At 5:12pm on May 16, 2011, Andreas Crox said… ကျွန်တော်လည်း Android Application တွေရေးဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို သိသမျှလေးတွေ share ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ No comments yet!
Add Ning App Min Lwin's Einstein Quotes
ဘာသာရပ်အကြောင်းအရာXMLXMLDTDXSLTAbout DOM & XPath APISAXကုိအသံုးျပဳ၍၊　Application Developing။XML Schemaဆုိသည္မွာ၊XMLDB ၏အသံုးျပဳႏွင့္၊ျဖစ္ႏူိင္ေျခမ်ား။XQUERYကုိသံုးျပဳပံု။JavaJavaကုိအျမန္ဆံုးေလ့လာျခင္းJava ဟင္းေပါင္းတစ္ခြက္Java SE6Java SE 7JDBCJava EE : Servlet. JSP, JSF, EJB, Web ServicesDesign PatternsStruts FrameworkSpring FrameworkDeveloping Enterprise Application with UMLJava ႏွင့္ XML မွာပင္ ေရးမၿပီးႏုိင္ပါသျဖင့္၊ Web Design အေၾကာင္းကုိ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ပါသည္။ Welcome toMyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
manawphyulay leftacomment for Aung Kyaw Htinyesterdaymanawphyulay leftacomment for Ko Chityesterdaymanawphyulay and ugly devil are now friendsyesterdaydevillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Wednesdaypeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်TuesdayNga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Dec 3LIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Nov 29pyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ (ျမန္မာလို)စာအုပ္ေတြေဒါင္းလုပ္လုပ္မယ္ (ဦးေအာင္ဟိန္းေက်ာ္၊ဦးသိန္းလြင္၊ေရႊမင္း၀န္ဦးဘုန္း.....)Nov 25 More... RSS